फिफा अवार्डमा नेपालको तीन भोट कसले कसलाई हाल्यो ? « Naya Page
फिफा अवार्डमा नेपालको तीन भोट कसले कसलाई हाल्यो ?
प्रकाशित मिति : 24 September, 2019 2:53 pm
काठमाडौं, ७ असोज । बार्सिलोनाका स्टार फरवार्ड लिओनल मेसीले ‘द वेस्ट फिफा फुटबल अवार्ड’ जितिसकेका छन् । मेसीले फिफा अवार्ड जितेको यो छैठौं पटक हो ।
मेसीले विश्वभरबाट आएको भोटको आधारमा युभेन्ट्सका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लिभरपुलका डिफेन्डर भर्जिल भान डाइकलाई पछि पारेर अवार्ड हात पारेका हुन् ।
विश्वभरबाट गरिएको भोटिङ चार तरिकाबाट भएको थियो । जसमा राष्ट्रिय टिमका कप्तान, राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक, देशको एक मिडिया र फ्यानले भोट गरेका थिए । चारै क्षेत्रको भोटलाई २५–२५ प्रतिशत हिस्सा दिइएको थियो ।
जसमा नेपालबाट पनि फिफा वर्ष खेलाडीका लागि भोट गएको थियो । फ्यानका लागि अनलाइन भोटिङ भएको थियो । यो बाहेक तत्कालीन राष्ट्रिय टिमका कप्तान विराज महर्जन, प्रशिक्षक योहान कालिन र द काठमाडौं पोस्टका पत्रकार रितेश रिजालले नेपालकोतर्फबाट भोट गरेका थिए ।
मनोनयमा परेका दशमध्ये तीन जनालाई भोटिङ गर्न सक्ने प्रावधान थियो । जसमा पहिलो नम्बरमा भोट पाउनेले १२ अंक, दोस्रो नम्बरमा भोट पाउनेले १० अंक र तेस्रो नम्बरमा भोट पाउनेले १० अंक पाउने व्यवस्था थियो । यसै आधारमा विश्वभरबाट भएको भोटिङमा मेसी उत्कृष्ट खेलाडी बनेका थिए ।
तत्कालीन कप्तान विराट महर्जनको भोट
प्रशिक्षक योहान कालिनको भोट
टेन हान इरिक
द काठमाडौं पोष्टका पत्रकार रितेश रिजालको भोट